Imtixaankii dugsiyada sare oo ay qaadaysay dowladda Soomaaliya oo la joojiyey. – Shabakadda Somalibile Media
Imtixaankii dugsiyada sare oo ay qaadaysay dowladda Soomaaliya oo la joojiyey.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Caawa ku dhawaaqay in la joojiyey Imtixaankii Dugsiyada Sare oo ay qaadeysay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
War kasoo baxay Wasiirka ayaa waxaa lagu sheegay in imtixaanka uu markale dib u bilaaban doono 27-ka Bishan May balse inta ka sokeyso uu istaagayo xilli ardayda Dugsiyada Sare ay mudo Saddex Maalmood ah imtixaanka galayeen.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in dhamaan imtixaankii socday ee la qaaday la baabi’iyey, isla markana dib loo bilaabayo.
Sababaha loo joojiyey Imtixaanka ayuu sheegay in Suuqyada lagu kaal iibsanayay qishka,isla markaana Waalidiin iyo dad kale ay faafiyeen Imtixaanka ayna dowladda doonayeen inay ku fashiliyaan.
Dad badan oo isugu jira Siyaasiyiin iyo Aqoonyahano ayaa Dowladda Soomaaliya gaar ahaan Wasaaradda Waxbarashada waxaa ay ku eedeynayeen inay mas’uul ka tahay in Imtixaanka habeen iyo Maalin Baraha Bulshada lagu faafiyo.